UK oo $10 Milyan oo dollar ugu deeqday Soomaaliya | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka UK u qaabilsan Afrika, Vicky Ford, ayaa maanta (17 Janaayo 2022) ku dhawaaqday lacag dhan 10.7 milyan oo dollar oo UK ku taageerayso dadka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaraha ba’an, xilli ay booqasho ku joogto Kenya oo qayb ka ah saddex waddan oo ku yaalla Bariga Afrika oo ay socdaal ku mareyso.
Dowladda Ingiriiska ayaa gargaarkaan u bixineysa si cunto degdeg ah iyo biyo nadiif ah loo gaarsiiyo qoysaska nugul ee sida ba’an ula ildaran abaarta aan joogsiga lahayn, waxayna qeyb ka tahay, 17 milyan oo gini oo UK ku taageereyso dalalka Soomaaliya, Kenya, Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed.
Xaaladda abaarta Soomaaliya ayaa ah mid ka sii daraysa, iyadoo in ka badan 90% dalka ay soo food saartay xaalado abaareed, ku dhawaad ​​5 milyan oo Soomaali ah ayaa gaajaysan, halka 3.5 milyan oo dadkaas ka mid ah ay sanadkaan u bahan yihiin gaar bini’aadantinimo oo degdeg ah, taasoo ay ugu wacan tahay roobabkii baaqday iyo dalag la’aanta dhacday abaar awgeed, 2.6 milyan oo qof oo kale ayaa ka qaxay guryahoodii colaadd iyo abaar awgeed.
Deeqdaan ayaa la filayaa in lagu taageero ku dhawaad ​​500,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya si ay u helaan biyo nadiif ah iyo sahay cunto, isla-markaana uga gaashaantaan Isbeddelka cimilada ee gobolka oo dhan sida daran u saameysay,
“Ballanqaadka UK ee ku aaddan taageeridda dalalka Bariga Afrika waa mid aan leexleexad lahayn, waxaanan ognahay in tallaabada hore ee hadda la qaaday ay ka hortagi karto khasaare ballaaran oo nolosha ah”. Ayay tiri Wasiirka UK u qaabilsan Afrika, Vicky Ford.
Safiirka Britain ee Soomaaliya, Kate Foster, ayaa dhankeeda sheegtay in xaaladda abaareed ee Soomaaliya ay tahay mid daran, isla-markaana ay malaayiin qof u baahan yihiin cunto naf badbaadin ah iyo biyo nadiif ah.
Kate Foster, waxa ay xustay in UK, mudnaan siineyso taageerada dadka ay saameeyeen dhacdooyinka cimilada ee aadka u daran, sida abaaraha iyo fatahaadaha, si loo fuliyo heshiiskii lagu gaaray shir-madaxeedka wadamada qaniga ah.
Dalku wuxuu ku jiraa xilli doorasho, iyadoo muddadii sharciga ahayd ee hay’adaha dowliga ah ay dhamaatay ku dhawaad hal sano ka hor, Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, ayaana labada gacmood ku haya hoggaanka doorashooyinka iyo gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen.